Coronavirus IgG & IgM Test Cassette orinasa sy mpamatsy | Azia Pasifika Vaovao
Ents Lisitry ny fonosana】
· Fototra fandriana: Kasety fitsapana, Desiccant.
· Fantsona capillary 100 (20 µl) mandritra ny fitsapana 100.
· Buffer santionany 12 ml ho an'ny fanadinana 100.
· Torolàlana fitsapana.
25pouches / boaty, boatin'ny fanonganana 15 * 14 * 6.5cm,ny lanjan'ny boaty dia 150g.
100boxes / baoritra, refy baoritra 72 * 62 * 36cm,22KGS.
Show Product Show】
Aretina Coronavirus 2019 (COVID-19) IgM / IgG Antibody Test dia haingam-pandeha haingana, mora takelaka ary mety tsara in vitro fiantohana amin'ny fitadiavana ny fahasamihafana misy ny otMika & IgG ny otrik'aretina COVID-19 ao amin'ny serum, ranon-tsina na santatry ny ra rehetra azo avy amin'ny marary voan'ny tsimokaretina COVID-19. Ny fitaovana dia natao hanampiana amin'ny famaritana ny fihanaky ny tsimokaretina farany na teo aloha teo amin'ny virus COVID-19 izay manenjika ny toe-javatra aorian'ny aretina avy amin'ny valan'aretina COVID-19.
Ity assay ity dia manome valiny mialoha fotsiny. Ny vokatra tsara dia tsy voatery ho areti-mifindra ankehitriny fa maneho dingana hafa amin'ny aretina aorian'ny aretina. Ny IgM positibo na IgM / IgG dia samy manome soso-kevitra ny fanambaràna tato ho ato, raha toa kosa ny positibo ny IgG manoloana ny otrikaretina teo aloha, na ny otrikaretina mangina.
Ny otrik'aretina ankehitriny dia tokony hamafisin'ny Real-Time Reverse Transcriptase (RT- PCR) na ny filaharahan'ny valan'aretina. Ny fitsapana dia natao hampiasaina amin'ny matihanina.
【Fitsipiky ny Assay】
Ny foto-kevitry ny Artron COVID-19 IgM / IgG Antibody Test dia fanafody immunochromatographic miaro-pandrika amin'ny tsikombakomba miaraka amin'ny fahasamihafana ny tsimok'aretina IgM & IgG amin'ny viriosy COVID-19 ao amin'ny serum, plasma, na santionany rehetra. Viriosy covid-19-
antigène manokana no miantehitra amin'ny volamena koloidra ary apetraka eo amin'ny pad conjugate. Ny monoklonal anti-human IgM sy ny IgG monoclonal anti-human IgG dia tsy miorina amin'ny tsipika andrana roa (T2 sy T1) ny membra nitrocellulose. Ny tsipika IgM (T2) dia akaiky kokoa ny santionany ary arahin'ny làlan'ny IgG (T1). Rehefa ampiana ilay santionany dia rehydrated ny conjugate volamena sy ny antibody COVID-19 IgM sy / na IgG, raha misy ao amin'ny santionany, dia hifanerasera amin'ny antigen conjugated volamena. Ny immunocomplex dia hifindra mankany amin'ny varavarankely fitiliana mandra-pahatongan'ny fizahana fitsapana (T1 & T2) izay hahalasan'ny IgM (T2) anti-olombelona mifandraika amin'izany ary / na anti-olombelona IgG (T1), mamorona tsipika mavokely hita maso, manondro. valiny tsara. Raha tsy misy antikony COVID-19
santionany, tsy hisy tsipika mavokely hipoitra amin'ny tsipika fitsapana (T1 & T2), izay manondro valiny ratsy.
Ho fanaraha-maso ny fizotran'ny asa anatiny dia tokony hiseho foana ao amin'ny Control Zone (C) ny tsipika fanaraha-maso rehefa vita ny fitsapana. Ny tsy fahazoana zaridaina mavokely mavokely ao amin'ny Zone Control dia manondro valiny tsy mety.
Proc Ireo fomba fanandramana】
Esory ny fitaovana fitiliana ao anaty paosin-tombo voahidy amin'ny alàlan'ny famotehana
ny notch ka napetrany ny fitaovana fitiliana eo amin'ny tany maina sy maina.
Ho an'ny ra rehetra:
Mampiasa tabilazo capillary, manangona ny rantsan-tananao manontolo mandra-pahatonga ny tsipika mainty.
Mampiasa pipette na sodina capillary, angony ny ra manontolo (20µl).
Ho an'ny serum / plasma:
Mampiasa pilao, manangona ny serum / plasma (10µl).
Ampio ny serum / ranon-dra / manontolo ra ao amin'ny rea ambony (akaikin'ny fikandrana fitiliana) amin'ny santionany tsara amin'ny fitaovana fitsapana nefa tsy misy ranon-drivotra (tazomy tsara ny fantson-tsolika / fantsom-bolo ary arotsaho moramora ny faranana amin'ny pad ao anaty santionany tsara amin'ny famindrana tsara. ).
Andraso ny 20-30 segondra; ampio 2 mitete (manodidina ny 90µl) amin'ny santionany santionany amin'ilay santionany tsara amin'ilay fitaovana fitsapana.
Vakio ny vokatra aorian'ny minitra 15-20. Ny endri-pinoana mahery vaika dia mety hiteraka valiny kely ao anatin'ny 1 minitra.
AZO ATAO METY AZONY INDRINDRA DIA EFA NY FAHOROA 30 MINATES
【Famaritana ny valiny】
Ny tarika misy loko mavokely dia tsy hita afa-tsy ao amin'ny faritra fifehezana (C), manondro valiny ratsy amin'ny otrikaretina COVID-19.
Ny tarika mavokely mavokely dia miseho ao amin'ny faritra fifehezana (C) sy T1 ary / na T2.
1) IgM sy IgG tsara, tarika hita maso ao amin'ny T2 sy T1, manondro valiny mety amin'ny otrikaretina COVID-19 mety ho hita.
2) IgM positibo, tarika iray hita eo amin'ny faritra T2, manondro valiny mety ho an'ny valan'aretina COVID-19.
3) IgG positibo, tarika hita maso ao amin'ny faritra T1, manondro valiny mety ho an'ny valan'aretina COVID-19.
Tsy misy tarika tsy hita hita eo amin'ny faritra mifehy (C). Avereno miaraka amin'ny fitaovana fitsapana vaovao. Raha mbola tsy nahomby ny fitsapana, azafady mifandraisa amin'ny mpaninjara miaraka amin'ny isa betsaka.
Show Fampisehoana atrikasa】
Previous: Voaroaka aprily
Manaraka: Face Shield
2019 Kitsiana fanandramana Ncov Novel Coronavirus
2019 Fitsapana Novel Coronavirus
2019 -Fana kitapo fitsapana fanatanjahantena Ncov
2019-kitapo fitsapana Ncov
Antibody Igm / Igg Test Cassette
Kasety fitsapana antibody
Kitapoka fitsapana antibody
Kasety fanandramana Antibody
Shina Antibody Igm / Igg Test Cassette
Shina Antibody Igm / Igg Test Kit
Chine test test antibody China
Kitapoka fitsapana any Chine
Chine fitsapana testibolin'i Chine
Kitapo fitsapana any Chine
Chine test testette volamena any Chine
Kitapotam-bolan'ny Chloidal any Chine
Chine test testette volamena any Chineidal
Kitapo fanandramana volamena Colloidal
China Cassonavirus Rapid Test Cette
Chine Coronavirus Rapid test Kit
China Cassonavirus Rapid Testing Cassette
Kitapom-panadinana Rapid test China Chonavirus
China Kaset fitsapana tena any China Coronavirus
Kitapom-panadinana Coronavirus Shina
Kitapo fitsapana tena any Chine Coronavirus
Chine test test cette Coronavirus
China Kaset fitsapana Coronavirus
Kitapo fanandramana Coronavirus
Shina fanaovana fitsirihana Coronavirus
Kitapika fitsapana Coronavirus
Kitapom-panadinana Covid China
Chine testing kasety
Kitapon'ny fitsapana any Chine
Shina Diagnostic Chine
Kitapo fitsirihana Chine
Shina fanaovana diabe diagnostika any Chine
Kitapo fitsapana diagnostika Chine
Chine fitsapana testina any Chine
Kitapo fitsapana diagnostika any Sina
Shina fanaovana kasety Igg / Igg test
Kitapo fanandramana Sina Igm / Igg
Chine Medical Diagnostic Cassette
Kitapo Diagnostika fitsaboana any Chine
Shina kasety fitsapana diagnostika any Chine
Kitapoka fitsapana diagnostika any Chine
Chine fitsapana fitsapana diagnostika any Chine
China Kaset fitsapana Reagent fitsapana Shina
Kitapom-panadinana Reagent China China
Fitaovana fitsapana Reagent any Shina
Shina Rapid Test China
Kitapoka fitsapana any Sina
Chine fitsapana fitsapana an'i China
China Kaset fitsapana momba ny fitsidihana any Sina
Kitapoka fitsapana virtoaly China
Chine test testette cine
Kitapo fanandramana China
Kitapo fitsapana Reagent any Shina
Shette fitsapana fanadinana any Shina
Chine test testing Reagent
Chine Test China
Kasety fanandramana volamena koloidaly
Kitapotam-bolamena vita amin'ny marika
Coletteidal fitsapana volamena
Fitsapana Coronavirus 2019 Ag Rapid
Fitsapana fitsapana Coronavirus Ag Rapid
Kitapoka fitsapana Coronavirus Ag Rapid
Fanadinana Coronavirus Ag
Fitsapana Antibody Coronavirus
Fitsapana fitsapana Coronavirus Antigen Rapid
Kitapoka fitsapana Coronavirus Antigen
Fitsapana fanandramana Coronavirus
Fitsapana fitaovana momba ny Coronavirus
Kitapom-pahaizana fitsapana haingana Coronavirus
Kitro fitsapana fanatanjahantena Coronavirus
Kitapn'ny fanandramana Coronavirus
Fitsapana tena Coronavirus Igg Igm
Fitsapana diagnostika Coronavirus Igg / Igm
Fitsapana Coronavirus Igg / Igm
Fitsapana fitsapana Coronavirus
Kasety fitsapana fanandramana Coronavirus
Kitapoka fitsapana fanenjehana Coronavirus
Kitapika fitsapana fanodinana Coronavirus
Fitsapana fitsangatsanganana Coronavirus
Kofehy fitsapana an'ny Coronavirus
Kitapoka fitsapana Coronavirus
Kitika fitsapana Coronavirus
Azo antoka ny fitsapana amin'ny Coronavirus
Kasety fitsapana Coronavirus
Kitapon'ny fitsapana Coronavirus ho an'ny olona
Whobeblood kitapom-batana Coronavirus
Kitro fitsapana Coronavirus
Diagnostika fitadiavana fitsapana Coronavirus
Vahaolana fitiliana Coronavirus
Kitapoka fitsapana Covid
Cetteid Fitsapana Kasety
Kitapoka fitsapana an'i Covid
Kitapotom-fitsapana haingana an'ny Covid-19
Covid-19 Kofehy fitsapana
Cobid-19 Kasety fitsapana
Kitapoka fitsapana Covid-19
Kasety fitsapana diagnostika
Kitapo fitsapana diagnostika
Kitapoka fitsapana diagnostika
Kitapo fitsapana fitsirihana
Fitsapana Coronavirus olombelona
Kasety fitsapana Igm & Igg
Kitm & Igg Test Kit
Kasety test Igm / Igg
Kit Kit / Igg test
Kasety diagnostika fitsaboana
Kitapo fitsirihana ara-pitsaboana
Kasety fitsapana diagnostika fitsaboana
Kasety fitsapana fanandramana fitsaboana
Fitsapana fitsapana haingana
Fitsapana fanandramana haingana
Fametahana fitsapana haingana
Kitapin'ny fitsapana haingana
Kitapoka fitsapana haingana
Rapette Virus Testette
Rapid Virus Kitete fitsapana
Reagent test Cassette
Kitapoka fitsapana reagent
Rehetent testette kasety
Rano Hdpe aprily amin'ny rano, Fiakanjo fiarovana, Fiakanjo fiarovana, Water-Proof Apron, Tariby endrika-vovoka mihetsiketsika, Akanjo fitsaboana fitsaboana,